Futhi nansi i-Apple Watch Series 5 - Thumela RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM Futhi nansi i-Apple Watch Series 5
Futhi nansi i-Apple Watch Series 5
I-Apple ibambe lo Lwesibili 10 Septhemba ngesethulo sayo semibhalo eyindabuko ye-iPhone entsha. Ngaphezu kwalesi sizukulwane esisha sama-Smartphones ama-apula, inkampani ye-Cupertino futhi iveze i-Apple Watch Series 5. Nakhu okudingayo ukwazi nge-smartwatch.
I-Apple Watch Series 4 yanyakenye yaba ushintsho olukhulu ekuhlelweni kwe-Apple Watch. Le modeli idlalise ukwakheka okuguqulwe kancane, okunesikrini esikhudlwana. Uma usenethemba lokuthi kuzoshintsha kuleli phuzu kulo nyaka, uzodumala kodwa lokho akusho lokhoI-Apple Watch Series 5 akusona isibuyekezo esifanele igama. Ngakho ngaphandle kokuqhubeka zonke izindaba esizothola kulesi sizukulwane esisha sewashi elixhunyiwe.
I-Apple Watch Series 5 isemthethweni
I-Apple imemezele ngokuziqhenya, ngale 5 Series, isikrini senziwa njalo (ekugcineni) ukubukeka kwayo. Kulabo abangazi, isikrini se-Apple Watch sivele ngokuzenzakalelayo kuze kube manje lapho isihlakala sehla. Ukuze ubone okuthize esibukweni, bekufanele uphakamise isandla, njengoba uzoba newashi lendabuko. Njengoba isikrini sivulekile njalo, asikho isidingo. Isikrini okukhulunywa ngaso isikrini se-LTPO esikwazi ukukala okuguquguqukayo okuguquguqukayo, phakathi kwe-1 ne-60 Hz. Lokhu kufanele kusize ekugcineni ukuzimela kwewashi. Ngaphezu kwalokho, i-Apple imemezela amahora we-18 wokuzimela, njengombanduleli wayo. Akungabazeki ukuthi abasebenzisi abaningi bangahle bakhethe ukuthuthuka kuleli phuzu kodwa kuzodingeka ukuthi baneliswe ngokuzimela okufanayo - kungenzeka ukuthi bekuphansi -. Kuzoba khona futhi konke ukudayela okusha kwewashi, okwenzelwe ngqo lesi sikrini njalo, kanye nezinguquko ezithile esibonelweni, ngaso sonke isikhathi ukuze kulingane nalesi sikrini esisha.
Nge-screen yayo ehlala isesikrinini, ukusuka ku-449 €
Ngaphezu kwalezi zinguquko ze-Hardware, i-Apple iphinde yethula uhlelo lokusebenza lwekhampasi entsha, uhlelo lokusebenza obekungacatshangwa ukuthi lubaluleke kakhulu ezizukulwaneni zokuqala ... Kungcono sekwephuze kakhulu kunangaphambili. Njengoba kunamahemuhemu, le Apple Watch Series 5 izonikezwa nge-aluminium nensimbi engagqwali kodwa futhi kwi-titanium ne-ceramic kanokusho. Intela eseceleni, i-Apple Watch ene-GPS izothengiswa kusuka ku-449 €, inguqulo yamaselula evela ku-549 €. Imingcele isivele ivulekile, ukutholakala kokuqala kumenyezelwe i-20 Septhemba.
I-Apple Watch yesikhathi esizayo ingakufakazela kuphela ukuthungwa kwesikhumba sakho
Uhlelo olungcono lokulandela ukulala ku-Apple Watch elandelayo?
I-Apple Iqala Uhlelo Lokulungisa Isikrini Samahhala se-Apple Watch
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.begeek.fr/et-voici-lapple-watch-series-5-327019
I-Apple TV + izokwethulwa i-November 1er nge-8 yangempela yochungechunge